सेयर बजार घट्दा उठ्छन् यी मुद्दा ! – TajaNepal
Home /Blog/सेयर बजार घट्दा उठ्छन् यी मुद्दा !
काठमाडौँ । नेपाली सेयर बजारमा पूर्वाधार निर्माण, सेयर बजार सुधारका मुद्दा तब मात्र उछालिन्छ, जतिखेर बजार घट्दो क्रममा रहेको हुन्छ । घट्दो बजार नै राजनीतिक दल, लगानीकर्ता हुन् वा बजार सञ्चालक तथा नियामक सबैले बजार सुधारको गफ गर्ने मेलो बन्ने गरेको छ । बजार बढ्दा भने सरकार आफू जस लिन र लगानीकर्ता नाफा निकाल्नै केन्द्रित हुने गरेका छन् । यही प्रवृत्तिले सेयर बजार सुधार गफमै सीमित हुने गरेको देखिँदै आएको छ ।
सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्र्याउने सरकारी योजना आजको होइन । आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा सुरेन्द्र पाण्डेले ल्याएको बजेटमा पुँजी बजारसँग सम्बन्धी मात्रै एउटा योजाना आयो, गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउने । आव २०७०–७१ मा शङ्करप्रसाद कोइरालाले र आव २०७१–७२ मा डा. रामशरण महतले ल्याएको बजेटले यही कुरा दोहो¥यायो । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ र गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली २०६६ ले गैरआवासीय नेपाललीलाई बैङ्कमा खाता खोल्न, पैसा फिर्ता लान सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । तर पनि बजारमा यी लगानीकर्ता प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । ‘केही समयअघि साथीभाइमार्फत् सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीले लगानी गरेको पनि सुनिन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो केही सुनिँदैन’– एक ब्रोकरले भने । ‘लगानी लैजाँदा नियामक निकाय राष्ट्र बैङ्कसँग पटक–पटक अनुमति लिइरहनुपर्ने भएकाले पनि उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन’,– नेप्सेका एक अधिकारी निरञ्जन फुँयाल बताउँछन् । दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्न नागरिकता आवश्यक पर्ने भएकाले पनि प्रक्रियागत समस्याहरू रहने गरेको फुँयालले बताए ।
हुन त लगभग दुई वर्षअघि गैरआवासीय नेपालीलाई भित्र्याउन भन्दै धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूको संलग्नतामा एउटा कमिटी पनि बनेको थियो । एक पटक बैठक बसेपछि त्यो कमिटीका सदस्यहरू अहिले एकलरूपमा अध्ययनमा लागेको संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन् । हुन त एनआरएनहरूमध्ये ८० प्रतिशत मध्यपूर्वी राष्ट्रमा रहेका र उनीहरूमध्ये धेरै सामान्य श्रम गर्ने वर्ग भएकाले पनि बजारमा आकर्षित गर्न नसकिने देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । हाल एनआरएनले चाहेमा लगानी व्यवस्थापक र सामूहिक लगानी कोषमा सहजसँग लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर एनआरएनको अनुपस्थितिमा लगानी व्यवस्थापकले पुँजी परिचालन गर्न समस्या देखिएकाले यी माध्यम पनि प्रभावकारी भएका छैनन् ।
सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीको जप आलाप भएको मात्र वर्षौं भएको होइन । सात वर्षअघि बजार उच्च घट्दा सेयर किन्ने र बढ्दा बेचेर बजारलाई स्वाभाविक गति दिने गरी मार्केट मेकर अर्थात् बजार निर्माता ल्याउने पहल थालिएको थियो । धितोपत्र बोर्डले सात वर्षअघि नै यससम्बन्धी कार्यविधि नै तयार भएको जानकारी दिएको थियो । कम्तीमा पाँच अर्बको कोष बनाएर नागरिक लगानी कोष वा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई मार्केट मेकरको रूपमा भित्र्याउने पहल भएको पनि थियो तर यो त्यत्तिकै सेलायो । २०७२ सालमा फेरि मार्केट मेकरको चर्चा चलाइयो । बजार न्यून विन्दु २ सय ९२ बाट क्रमिक रूपमा उकालो लाग्दै गर्दा बजारमा १० अर्बको कोष बनाएर मार्केट मेकर ल्याउन लागेको नियामकहरूले नै सार्वजनिक गरे । तर अहिले डिलरको रूपमा ल्याउने भनिएको काम भने अगाडि बढेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा रामशरण महतले ल्याएकै बजेटले नेप्सेलाई पूर्ण स्वचालित प्रक्रियामा लाने घोषणा गरेको थियो । हाल यसको लागि आवश्यक प्रणाली निर्माण भइरहेको छ । नेप्सेका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीताराम थपलियाले गत कात्तिक २१ गते नै अनलाइन कारोबारको परीक्षण हुने बताएका थिए । प्रणाली निर्माता कम्पनीले गत वर्ष माघमा प्रणाली निर्माण गर्न १४ महिनाको सीमा पाएको थियो । तर कम्पनीले जेठमा मात्रै प्रणाली हस्तान्तरण गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ ।